Goolka Xiga Ee Mo Salah Oo Ku Kacaya 100 Malyan Oo Pound & Sababta Dadka Reer Masar Ay Ugu Duceysanayaan Inuu Gool Dhaliyo Oo La Ogaaday -
HomeciyaarahaGoolka Xiga Ee Mo Salah Oo Ku Kacaya 100 Malyan Oo Pound & Sababta Dadka Reer Masar Ay Ugu Duceysanayaan Inuu Gool Dhaliyo Oo La Ogaaday
Goolka Xiga Ee Mo Salah Oo Ku Kacaya 100 Malyan Oo Pound & Sababta Dadka Reer Masar Ay Ugu Duceysanayaan Inuu Gool Dhaliyo Oo La Ogaaday
March 21, 2018 F.G ciyaaraha 0
Mohamed Salah ayaa noqday mid shabaqa daris la ah, wuxuuna dhexda kaga jiraa xilli ciyaareed qurux badan oo uu ku qaadanayo Anfield, balse goolashiisa markaan waxey qiimo u leeyahiin dadka reer Masar kadib markii shirkadda taleefoonada dalkaas ay ballan qaadyo sameysay.
Salah wuxuu dhaliyay 36-gool, 41-kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkaan dhamaan tartamada oo dhan, sidoo kalana wuxuu 28-gool ku hogaaminayaa tartanka loogu jiro kabta dahabka gooldhalinta Premier League.
Mo Salah oo 34 Malyan oo Pound ku yimid Anfield ayaa sidoo kale kooxdiisa si weyn uga caawiyay iney wareega quarter final-ka tartanka Champions League muddo kadib soo gaarto.
Shirkadda Isgaarsiinta Vodafone Egypt ayaa ogolaatay iney macaamiisheeda siiso 11-daqiiqo oo ku hadalka taleefoonka bilaash ah mar walba oo uu gool dhaliyo Mohamed Salah laga bilaabo hadda.
Shirkadda taleefoonada waxey website-keeda ku xaqiijisay iney leedahay macaamiil gaareysa 43 Malyan, waxaana lagu sheegay qiyaasta isku cel-celis ahaan in qorshaha yahay iney u adeegsato barnaamijka Microwave Systems.
Waxaa lagu qiyaasay dakhliga ay ka heli laheyd daqiiqadaha bilaashka ah oo ay ka ballan qaaday macaamiisheeda aduun dhan 100 Malyan oo Pound, taasoo ah lacag aad qaali ugu ah shirkadda Vodafone.
Kadib markii uu afar gool ka dhaliyay Watford, Salah uma muuqan mid hoos u dhigaya gooldhalintiisa, waxaana la filayaa inuu kulamada soo aadan shabaqa soo taabto.
Nasiib wanaag, shirkadda Vodafone iyo Mohamed Salah waxey leeyahiin xiriir fiican wuxuuna dhawr jeer gobolka Merseyside ugu sameeyay xayeysiin.